Hiika alaabaafi asxaa Oromoo sirna Gadaa – Oromedia
Home » Aadaa » Hiika alaabaafi asxaa Oromoo sirna Gadaa
Bulchiinsa Sirna Gadaa keessati Bokkuufi Faajjiin ykn Alaabaan mallattoo aangoo olaanaati. Bokkuun mallattoo mootummaati. Sirna Gadaa keessati iddoo olaanaa kan qabu Abbaa Bokkuuti. Aangoon kun filannoon osoo hinta‘in dhalootaan kan darbaa dhufeedha. Odaan tokkummaafi Dimokraatawaa saba Oromoo bakka bu’a. Innis akkuma alaabaatti sirna Gadaa durii irraa akka maddudha barreefamni Sirna Gadaa Oromoo jedhuu intarneetii irraa arganne kan mul’isu.
A. Halluu Gurraacha: Olaantummaa Waaqati. Oromoon Waaqni gurraacha jedheeti amana. Huurriin bokkaa qabu guraacha, qaroon ijaa, illi (agartuun) gurraacha. Gurraachi kabajaaf angafummaa, badhaadhummaafi waan hedduu of keessaa qaba. Gurraachi akka hennaattis, waan egeree ti; waan dhufaa jiru, kan hirkoo, kan fageenyaa, kan mil’annoo fi kan abdii egeree ti.; amantii dha; ayyaana; gurraachi mallattoo fi mul’ annoo egeree ti.
Namooti yeroo garii, gurraachaa fi dukkana walfakkeessanii hubatu. Garuu, Gurraachi halluu mallattoo kuushummaa ibsu, kan amantii fi ayyaanaa ti. Dukkanni immoo wana ifa hin qabne, kan abdiin keessa hin jirree dha.
B. Halluu Diimaa: Diimaan lubbuu dha; kan ittiin gahanii, bilchaatanii, guutanii argamuufi gootummaadhaan mirga lammiitiif wareegamuu bakka bu’a. Diimaan aarsaa dha. Waanti hedduun yeroosaa eeggatee ga’uufi ija guutuu isaa agarsiisa. Diimaan akka yerootti waan ammaa ti; waan har’aa fi waan hojiitti jiru akn of keessaa qabuu dha; waan amma hojjatamaa jiru kan of keessatti hammatu, jiruu fi jireenya yeroo ti; diimaan Gadaa har’aa ti; mallattoo tikaa, waraanaa, falmaa, jaldhaabaa fi siyaasaa hawaasaa ti.
C. Halluu Adii: Xumuramuu yookiin raawwachuu agarsiisa. Hurriin rooba hinqabne adiidha. Dabbasaan (rifeensi) nama dulloomee harriin adiidha, daaraan adiidha, lafee gogaan adiidha. Kanaaf adiin mallattoo raawwachuu ykn xumuramuuti.
Adaan akka hennaatti, waan darbe, kan waan har’ aaf hundee ta’ee jiruu dha. Adiin kuufama kaleessaa ti; jildii har’a maayii baasuu dha; seenaa dha. Adiin Waayyuu, Wayyuu, fi hayyuu sabaa irraa kan waraabamu, beekumsaaa fi ogummaa kuufame; adiin akka aadaa Oromootti, yaadannoo waan darbee ti.
Akkasumas Sirna Gadaa keessatti alaabaan Oromoo Asxaa Odaa magariisafi urjii shan of irraa kan qabudha. Hiikni isaas, Odaan mallattoo araaraa, dimokraataawaafitokkummaa saba Oromooti. Urjiileen shan immoo, wiirtuuwwan Odaa addaddaa (Odaa Nabee, Odaa Bultum, Odaa Bisil, Odaa Roobaafi Odaa Bulluq) ykn caasaalee shanan Oromiyaa bakka bu’uu ni mala.
Gaaddisni Odaa iddoo itti Ayyaanni Muudaa raawwatuufi miseensonni Gadaa sirnaAyyaana ce’umsaa itti sirneeffatanidha. Galmi Abbaa Muudaafi teessoon Abbootii Gadaa Odaa jalatti ijaarama.
Walumaagalatti halluuwwan sadeen akkasumas asxaan Oromoo Odaan Sirna Gadaa Oromoo keessatti dur irraa kaasanii tajaajilarra oolaa kan turaniifi hanga yoonaattis ulfinaafi kabaja isaanii eeggatanii ibsama Oromoo ta’aanii kan itti fufaniidha. Oromoonmarti hiikawwan halluufi asxaa alaabaa isaa beekuun jaalala olaanaadhaan kunuunsee yoonaan ga’eera. Dhaloota dhufutti dabarsuufis hiika isaa beekuurra darbee wareegama itti kanfalame yaadachuun seenaa isaas dhalootaaf dabrsuu qaba jenna.
Previous: Raada Gaarree
Next: Foolleen maal?